သင်အမြဲရှည်သောဆံပင်ကြီးထွားဖို့အိပ်မက်မက်, ဒါမှမဟုတ်အလျင်အမြန်တစ်မှုမအောင်မြင်ပါဆံပင်ပုံစံတွေ၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖယ်ရှားပစ်ရချင်တော့ပါလျှင် - Pantovigar ဆံပင်။ ဤရွေ့ကားဗီတာမင်အော်ဂဲနစ်တိုးတက်မှုနှုန်းအရှိန်မြှင့်, ဒါပေမယ့်လည်းရာသီအလိုက်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှ, သင်ဆံပင်၎င်း၏ဟောင်းတဦးအထူမှပြန်လာကြလိမ့်မည်သာ။
ဗီတာမင် Calling, ငါတို့အနည်းငယ် slukavili ပါပဲ။ တကယ်တော့ Pantovigar - ဆံပင်များအတွက်လက်ရှိအချိန်တွင်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်း။ ဗီတာမင် B ကြွယ်ဝဆေးဆိုင်တဆေးများ၏နည်းလမ်း၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်, ဟော်မုန်းပုံမှန်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်, keratin, ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်။ အတူတကွဤတ္ထုများဟာဒီကဗျာအကျိုးသက်ရောက်မှုပေး:
ပိုပြီးသိပ်သည်းခြင်းနှင့် elastic အောင်, ဆံပင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုးတက်အောင်;
အဆိုပါအသားအရေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အရေပြား moisturize;
အဆိုပါ Alopecia သွေးထဲတွင် androgynous ဟော်မုန်းတစ်ခုတိုးလာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မဟုတ်ပါလျှင် Pantovigar ဆံပင်ကျွတ်သာအကြံပြုလိုတယ်ဆေးပြားကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအခြေအနေ၌, သင်ပထမဦးဆုံးအလုံးစုံပုံမှန်ရမယ် ဟော်မုန်းဟန်ချက် , သာထို့နောက်သင်ထုတ်ကုန်ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ သည်အခြားကိစ္စများတွင် Pantovigar အလွယ်တကူပျံ့ Alopecia နှင့်မြို့ပတ်ရထားနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။
Pantovigar - ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကိုးကွယ်ရာ, ဒါပေမယ့်လည်းဖွတ်မြီးထိုး၏အရှည်နှင့်အတူပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေသောသူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအဓိကအဆောက်အဦးပစ္စည်းများဆံပင်နှင့်လက်သည်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်း keratin ပါရှိသည်နှင့်ကျန်းမာဆံပင်ကြီးထွားမှုနှုန်း၏ဒုတိယလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုမှသုံးကြိမ်တိုးပွါးပေးသောကယ်လစီယမ်၏စုပ်ယူမှု, တိုးတက်ကောင်းမွန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများမှပြန်လည်ကု အကယ်. တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကာလအတွင်းပျမ်းမျှကိန်းဂဏန်းများတစ်လလျှင် 2-2.5 စင်တီမီတာအဘို့မှတ်။ သို့သော်ဤသည် - ကန့်သတ်မရှိ, ကြောင့်တက်ဘလက်ဆံပင်ကြီးထွားမှုအတွက် Pantovigar အချို့ကိစ္စများတွင်, သူတို့က 3-3.5 စင်တီမီတာမှနောက်ကျောကြီးပွားသတည်း။
သငျသညျကုသမှု Pantovigarom စတင်ခင်မှာ, ကအကောင်းဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးတာ 5-7 လကြာမှတဆင့်ထင်ရှားသောမူးယစ်ဆေး၏စုပေါင်းသက်ရောက်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ဒါကြောင့်ကိုဆိုလိုသည်သောကြောင့် - စျေးပေါမဟုတ်, သင်, ကောင်းစွာဤမျှကာလပတ်လုံး, သင်အလုံအလောက်သည်းခံခြင်းရှိမရှိရလဒ်စောင့်ဆိုင်းရန်အဆင်သင့်စဉ်းစားရန်ရှိသည်။ တခါတရံမှာသို့သော်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်အတိုင်းအတာအဖြစ် ဆံပင်ကျွတ် တစ်လအတော်လေး Pantovigar ကိုသောက်လော့။ ညွှန်ကြားချက်အရ, မူးယစ်ဆေးဘောဇဉ်စဉ်အတွင်း3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် 1 ဆေးတောင့်ကိုယူသင့်ပါတယ်။ Tablet ကိုသန့်ရှင်းသောရေများသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုမသောက်ရရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒီမှာ အကယ်. ကိစ္စများ၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်တက်ကြွစွာအေးဂျင့်မြင့်မားတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့, Pantovigara ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, အစာအိမ်အတွက်အူနဲ့အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတွက်နာကျင်မှုအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
analog Pantovigara ဆံပင်
ယနေ့အထိ, ဆံပင်တိုးတက်မှုနှုန်းမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းအများကြီးထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောရှိသည်အရေးယူကားမောင်း: တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်ဖို့ဆံပင်လှုံ့ဆော်ဖို့ဦးရေပြားသွေးတစ်ဦးအလုအယက်ဖြစ်စေတဲ့အချို့နည်းလမ်းများ, အခြားသူများဆံပင်၏အာဟာရတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ အဆိုပါဒုတိယအုပ်စုအများအပြားဖြည့်စွက်, တက်ဘလက်အတွက်ဗီတာမင်နှင့်ဆေးဝါးများ, အလားတူ Pantovigaru ပါဝင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအောက်ပါမကြာသေးမီနှစ်များတွင်လူကြိုက်အများဆုံး:
Bean ကို Merz;
ဤအရန်ပုံငွေများ၏ဖွဲ့စည်းမှုသူတို့က, ကောင်းစွာဆံပင်နှင့်လက်သည်းအားကောင်းလာစေရန်ဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာရေးအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်, အလွန်ကွဲပြားခြားနားဘူး။ အထက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏အရည်အသွေးရှိသောကြောင့် Pantovigar နှင့် Merz, Trichology ပိုပြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ရသေး, သူတို့ကအစိတ်အပိုင်းတခုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအလွန်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု - အကြောင်းရင်းများ, ကုသမှု
ရေနံ amly ဆံပင်
Long က Oblique မြိတ်
Burdock အမြစ်ဆံပင် - ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ချက်ပြုတ်နည်းများ
အထည်ပေါ်ဆံပင်လေလုပ်နည်း - သင်မသိခဲ့ပါကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာ
ဆိုဖီယာ Vergara ကတစ်ခုတည်းမိခင်ဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုသိ
Fibrocystic ရင်သားကင်ဆာရောဂါ - လက္ခဏာတွေ, ကုသ
အတ္ထုပတ္တိအဲလစ်ဇဘက် II ကိုမင်းသားဖိလိပ္ပုနှင့်အတူသူမ၏မင်္ဂလာဆောင်ရာအရပျယူနိုင်ဘူးဟုဆိုသည်
ကလေးများအတွက် Stomatitis - လက္ခဏာတွေ, အကြောင်းတရားများ, ရောဂါကုသမှု
Feng Shui လုပ်ငန်းခွင်
ရှည်သောဆံပင် 2015 မင်္ဂလာဆောင်ဆံပင်ပုံစံတွေ
အဘယ်ကြောင့်အရွက်အဝါရောင် cyclamen လှည့်သလဲ?
Minced အသား meatballs နှင့်အတူဟင်းချို - စာရွက်